हाम्रा मालिकहरुको बोली र झोलीको रक्षा गरौँ ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
हाम्रा मालिकहरुको बोली र झोलीको रक्षा गरौँ !
हामी झोँकतन्त्रको नयाँ लोकमा बिराजमान छौँ । हामी नयाँ युगका नव हनुमान बन्न गर्व गर्छौँ, किनकी हाम्रो आफ्नो लक्ष्य हुँदैन, हामी हाम्रा मालिककै लक्ष्यमा हिड्छौँ , यो हिडाईकै क्रममा हाम्रा श्रद्देय मालिकहरुकै कारणले गर्दा बेला बेलामा गुलियो चास्नीमा डुब्न हामी पनि पाईरहेकै छौँ, ख्वामितहरुको जूठोमा भएपनि अघाउन पाईरहेकै छौँ । त्यसैले ख्वामितहरुको गुणगान गाउन बाट हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । हामी निति, नियति र निरन्तरतालाई बदल्न मालिकहरुको पक्षमा जे पनि गर्न तयार छौँ ।
थाहा छ, हाम्रा मालिकहरुका दाँत पनि अचम्मका छन् । दाँत मात्र होईन दिमाग़, आँखा र भाका पनि अचम्मका छन् । हाम्रा कोही मालिकका दाँत देखाउने दाँत छन् भने कोही मालिकका दाँत लुकाउने दाँत छन् , कोहीका चपाउने दाँत छुट्टै छन् । तर मालिकका दाँत लुकाउने होऊन् या देखाउने होऊन, या चपाउने दाँत, गाथ र माथहरुको रक्षा गर्नु हामी हनुमानहरुको दायित्व हो । किनकी मालिक भनेको भगवान जस्तै हुन् , मालिकका पनि मालिक हुन्छन् रे, तर त्यसबारे हामीलाई धेरै थाहा हुन्न । यत्ति थाहा छ मालिकहरु पनि यता उताका ठूला मालिकहरु मार्फत निर्देशित हुन्छन् । ती जो सुकै मालिकको पनि जय होस् १
हामी हाम्रा मालिकहरु प्रति पाल्तु कुकुरहरु भन्दा पनि कम वफ़ादार छैनौ । परि आएको खण्डमा मालिकको मलमूत्र समेतलाई हामी चन्दनीकरण गर्न सक्छौँ, उहाँहरुका बोलीलाई महावाणी बनाउन सक्छौँ र उहाँहरुको बिप़क्षमा बोल्ने दुर्गाहरुको पनि तेजोवध गर्न पनि सक्छौँ । किनकी हामीलाई हाम्रा मालिक प्रति अपार प्रेम छ । हामी यो प्रेमलाई त्यसै मर्न दिन्नौँ । यसलाई बचाउन बन्द हड़ताल त के हामी भोग हड़ताल या ढोग हड़ताल जे गर्न पनि तैयार छौँ ।
हाम्रा मालिकहरुको पेशा नै यही हो, जागिर नै यही हो, त्यसैले आफ्नो पेशाबाट आएका सेता होऊन् या काला सबै सबै धन सम्पत्तिको हामीलाई हाम्रा मालिकलाई जत्तिकै अथाह माया छ, हाम्रा मालिकहरुले त्यसलाई लुकाउन या देखाउन छुट छ, हामी वफादार कुकुर जस्तै भएर उहाँहरुले गरेका सबै कर्मलाई सत्कर्म भनेर प्रचार गर्नु हाम्रो धर्म हो । हामी गास, लास र आस सबैको आडमा मान्छेको मष्तिष्क हल्लाउने गरी प्रशंसा गर्छौँ । बदलामा हामीलाई मालिकको निगाह मात्र काफ़ी छ । हामी मालिकबाट एउटा अद्भुत रत्याउने बूटीद्वारा रक्षित र प्रशिक्षित छौँ ।
हाम्रा मालिकहरुले जेल नेल भोगेको जोगी हुनलाई होईन, यही नै मुख्य पेशा भएपछि त्यसको कमाई चाहे लुकाऊन् चाहे देखाऊन् हाम्रा मालिकहरुको अधिकारको कुरा हो । त्यसैले लुकाएको र देखाएको हाम्रा ख्वामितहरुको आन्तरिक लोकतन्त्रको उपहास गर्ने सबै पश्चगामी हून् , सबै बिना धूनका बाँसुरी हुन् । आऊँ हाम्रा मालिकको सम्पत्ति रक्षा गरौँ । हाम्रा मालिकहरुको बोली र झोलीको रक्षा गरौँ ।
अहिले केही मिडियामा हाम्रा मालिकहरुको सम्पत्ति बिवरणको चर्चा चुलिएको छ । यति सम्पत्ति लुकाएको र यति कमाएको भनेर रोईलो गर्ने र यति लुकाएको भनेर कोलाहल मच्चाउनेहरुको बिगबिगी छ । हामीलाई थाहा छस् लुकाउनेहरुले पनि हाम्रै वफादारी अनि छहारीमा लुकाएका छन् , देखाउनेहरुले पनि हाम्रै निगरानीमा देखाएका छन् । हिजो देखाउने र लुकाउने दुबैको चर्चा यसै गरी नभएको होईन, यसले न हिजो कसैको दाल गलेको थियो न आज कसैको दाल गल्नेछ । त्यसैले लुकाउनु र देखाउनुको महात्म्य पाठ गरिरहनु आवश्यक छैन , हामी संग देखाउने र लुकाउने अनि त्यसलाई टेकाउने पनि तागत छ। मालिककै स्वेत निगाहले हामी चलायमान छौँ, मालिक अह्राउँछन, हामी गर्छौ, मालिक छर्छन्, उनको खेती जोगाउन हामी मर्छौँ किनकी मालिक हाम्रा साक्षात् भगवान हुन्, त्यसैले यिनीहरुको दम्पती र सम्पत्तिको रक्षा गर्न हामी हरेक क्षण तयार छौँ । कतिपय बेला मालिकले हामीलाई अह्याउनु पर्दैन हामी मालिकको पक्षमा स्वतस् स्फूर्त लागि हाल्छौँ ।
हाम्रा मालिकहरु केही देखाउन डराउँदैनन्, केही लुकाउन डराउँदैनन्, अनि लुकाए भनेर उफ्रेका उभयचरहरु संग पनि डराउँदैनन्, सम्पत्ति देखाएर ताज्जुब मानेका च्वँ च्वँमानहरु संग पनि डराउँदैनन् किनकी हाम्रा मालिकलाई हामी जस्ता वफ़ादार हनुमानहरुको छत्र छाँया छ, छिमेकी र अमुक अमुकहरुको सम्मुख छ । हाम्रा मालिक जनताका नाममा काम गर्छन् त्यसैले जसको नाममा काम गर्यो तिनकै नाममा फल खाने पनि छुट छ, तिनकै नाममा महल, उद्योग, धन, दौलत जे जे पनि देखाउने या लुकाउने छुट छ ।
हाम्रा मालिकहरुले लाजु भन्ने शब्द निलम्बन गरिसके । लाज भनेको आधुनिकताको बैरीु हो, सात्विकताको बैरी हो, निष्ठा र ईमानको बैरी हो, अचेल नग्नता मन पराईन्छ, कुटीलता र कामुकता मन पराईन्छ, त्यस्ता बैरीलाई च्याँपेर हाम्रा मालिक निदाउन सक्दैनन् , यदि यसो गर्न थाले भने हामी हनुमानहरुको कन्तबिजोग हुन्छ, त्यसैले पनि हामी उनको लाज बिरुद्दको अपरेशनमा अहोरात्र खट्छौँ, खटिरहने छौँ ।
तर हामी हनुमानहरु एउटा कुरामा सहमत छौ स् हामीले हाम्रा प्यारा मालिक र हाम्रा मेहनतले आर्जेको यो लोकतन्त्रले बोल्न र बाल्न नसक्ने ट्यार ट्यारे पाहाहरुलाई बोल्ने र बाल्ने अनुमति दिएको छ , घोक्रो फूल्ने गरी चिच्याउन अनुमति दिएको छ ,हिजो बोल्दैमा मामा घर या जिजु आमा घर जाने प्रथाको अन्त्य भएको छ, यसलाई नै ठूलो उपलब्धि मानेर लोकका पाहा र उभयचरहरुले चित्त बुझाउनुको बिकल्प छैन, मन थाम्नुको बिकल्प छैन । तर त्यसको पनि सीमा हुनेछ हामी सीमा नाघेपछि जो कोहीलाई पनि सुहाउँदो जवाफदिनेछौँ ।
हामी लोकका सबै उभयचर हरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौस् हाम्रा मालिकले देखाएका या नदेखाएका सबै खाले सम्पत्तिहरुको बारेमा गलत टिप्पणी गरेर समय बर्वाद नगरौँ, हाम्रा मालिकका पछि लागेर दण्डको भागी नबनौँ । किनकी हाम्रा मालिकहरुले जे लुकाएका छन्, त्यो सत्य हो, जे देखाएका छन त्यो पनि सत्य हो, हामी लुकाउने र देखाउने दुबै हैसियत राख्न सक्छौँ, हाम्रा मालिकले सम्पत्ति मात्र होईन नीति, आचरण र अपचलनलाई लुकाउने सामर्थ्य राख्छन् , हामी नूनलाई सुन र सुनलाई नून बनाउने सामर्थ्य राख्छौ, त्यसैले हाम्रा मालिकहरुका बिरुद्द बिष बमन नगरियोस्, हाम्रा अदृश्य शक्तिहरु प्रयोग गर्न हामीलाई बाध्य नपारियोस् ।
हामी हाम्रा मालिकको लुकाएको या देखाएको सबै सम्पत्तिहरुको रक्षा गर्न सक्षम छौँ । किनकी हाम्रा मालिक हाम्रा सम्पत्ति हुन् यिनलाई बचाउनु हाम्रो परम धर्म हो । बरु आउनुस चुपचाप तपाईँ पनि हाम्रा मालिकको सम्पति रक्षा गर्ने महान अभियानमा लाग्नु होस । चास्नीमा डुब्न नदिए पनि एक दुई सुरुप लगाउन पक्कै दिनेछौँ । हाम्रा मालिकहरुको जय होस् १ हामी हनुमानहरुको जय होस १
लेखक अमेरिकामा बस्छन् ।